Kwinqaku ethi "Indlela yokutshintsha umfanekiso uze ukhethe okulungileyo" siya kukuxelela indlela yokutshintsha umfanekiso. Ngokuqhelekileyo xa umfazi enganeliseki ngento ethile ebomini, abahlobo bathi, kufuneka uguqule umfanekiso. Umfanekiso, yindlela esiyiqonda ngayo lo mntu okanye loo mntu. Zama ukuchaza intombi yakho ngaphandle kokulivakalisa. Cinga nje ngento. Uya kuza engqondweni ukuba unontlalontle, usebenza kakuhle kwisebe le-parfumery, mhle, unomfanekiso omhle okanye unqongophala opheleleyo, uzibukele, kodwa ngamanye amaxesha ezikhonkwane ozibonayo. Akathethi, kodwa ngelinye ilanga, xa esela kakhulu, watshela umyeni wam ukuba wayemthanda kakhulu. Umntu ngamnye uya kuba nolwahlu lwazo. Zonke izitshintshi ziya kuba ngumfanekiso wakho womhlobo.
Izizathu ezisibhozo zokuba kutheni ufuna ukutshintsha umfanekiso wakho
Akusoloko kunokwenzeka ukutshintsha umfanekiso, ukuze kube kanye, kwaye ngonaphakade. Emva koko, ngexesha lokuphila, utshintsho lwefashoni, ukubaluleka komfanekiso kwaye ngoko umfanekiso ngokwawo uguquka. Ukuba oku kungenzeki, ngoko ke umntu, njengokuba kunjalo, ukhululeka emfanekisweni ofanayo, kwaye lo mfanekiso usebenza kakade kumonakalo womnini wayo.
1. Utshintsho lwemeko yentlalo: bafumana umsebenzi omtsha ophezulu, bafumana ukunyuswa okulungileyo kwinqanaba lomsebenzi, batshata i-oligarch kunye njalo.
2. Xa iminqweno nemibono yakho ishintshile, kwaye uziva ukuba sele "ukhulile" kumfanekiso wangaphambili.
3. Ukubonakala kwakho kukuthintela ekuqhubekeni phambili kunye nempumelelo yempumelelo engafanelekanga "ngepasses".
4. Kungekudala, abantu besini esahlukileyo baye bayeka ukunyamekela.
5. Ukwandisa, abantu abakujikelezile bathi ixesha lokuba ukhule.
6. Ukuba uthandana nendoda egqoke ngesitayela esahlukileyo kunokuba wenze kwaye ufuna ukumnqoba.
7. Xa uziva 'ungahlali kakuhle,' kuba abanye babonakala bengcono kunani.
8. Ufuna ukuqala ubomi obutsha, kwaye ukhathele konke.
Yintoni ke ukutshintsha?
Kukho umxholo wesitayela. Isitayela kukudibanisa ukuzenzela, izambatho, izesekeli kunye neenwele. Izitayela zenzeke ezahlukileyo: ezihle, eziklasi, ezemidlalo, ezoshishino njalonjalo. Enyanisweni, ukutshintsha into efunekayo kuwe kufuneka uhambe ngokubonisana nomenzi womfanekiso? Yaye ngubani na oya kuqinisekisa ukuba lo ngumfanekiso wendalo, kungekhona umgcini wezinwele ofuna ukufumana imali eyongezelelweyo, kwaye uzibiza ngokuba ngumfuziselo womfanekiso?
1. Awuyithandi into, kwaye wanquma ukutshintsha into ebomini bakho. Khawucinge nge-rhombus of harmony, ine-4 ubuso obulinganayo, kwibuso ngalinye ledayimane kukho umbhalo. Kwiphepha lokuqala - umzimba, kwicala lesibini - ityala. Ngecala lesithathu - oonxibelelwano, kwaye kwicala lesine - imfesane, uphuhliso lomntu. Yonke le liyinxalenye yobomi bethu. Umzimba, eli lixesha elingakanani ebomini esilinika imizimba yethu. Ukuxulela, iigyms, ibhafu kunye njalo. IShishini, lixesha elingakanani esinika lona ishishini, umsebenzi, iintlanganiso kunye namaqabane ebhizinisi kwishishini. Abafowunelwa - ixesha elingakanani esilinika izihlobo, abahlobo, bathandekayo. Iingcamango nophuhliso lomntu, ezi ziphupha, izicwangciso zobomi, ukufunda iincwadi ezinomdla, ukuya kwiikhosi. Xa sinika ubungakanani besikhathi esifanayo kubo bonke ubuso bedayimane, ngoko sifumana ukuvisisana okupheleleyo ebomini.
2. Ukuzithemba nokuzithemba. Ukuba ukuzithemba kungaphunyezwa, umfanekiso omhle awuyi kuvela. Ukuzithemba kufuneka kuqheleke. Yilapho iziganeko zakho zihambelana noko ukulindele. Ukuba umntu usebenza, ulindele ngakumbi kuye kunokuba akwazi ukwenza. Laba bantu babeka ixesha elidlulileyo xa kufuneka bafikelele kwiinjongo ezithile, baze baxakeke xa bengayifumani into abayifunayo. Kufuneka sibuke ngokubalulekileyo ebomini size senze impumelelo yangempela.
3. Buyela kuwe, ekubonakaleni kwakho kwendalo, akudingeki ukuba ama-brunettes abe yi-platinum blondes, awufumani mva. Umbala wenwele ungcono ukukhawulela ithoni yakho yendalo. Emva kwakho konke, ngezemvelo awukwazi ukuphikisana naye, wayesazi kakuhle nangemibala oyifunayo ukuzalisa ulusu, amehlo kunye neenwele. Ufuna ukuliphulaphula, kwaye uya kuzuza kuphela kuyo.
Unokugqiba njani ukutshintsha umfanekiso?
Wonke umfazi unemifanekiso yakhe. Omnye ubambelela kumfanekiso weklasikhi, umntu umsekeli womfanekiso wesifazane - i-vamp. Emva kwexesha, kukho umfanekiso wesetyhini. Uba yingxenye ebalulekileyo yobomi bakhe, sele esebenze iminyaka, umfanekiso wakhe udibaniswe, yiyiphi intsimbi eyala ngayo umgcini wezinwele, apho amathoni asebenza ngayo ukwakheka kwakhe, ukuba ukhangeleka njani. Ngokuqinisekileyo, ukuzinza kulungile, kodwa ngamanye amaxesha ufuna ukutshintsha into ngaphakathi kwakho, ukufumana umfanekiso omtsha, zama omnye umfanekiso. Akuyi kuba nzima ukwenza oku, kubalulekile kuphela ukuba ulinde.
Ngokuqhelekileyo kwenzeka ukuba isiganeko sisishukumisela ukuba sitshintshe. Kungaba ukuzalwa komntwana, ukuxothwa emsebenzini, ukuhlukana nomntu othandekayo. Nasiphi na isiganeko ebomini sitshintsha indlela eqhelekileyo yezinto, iba yintlabhodi yokukhawuleza ekukhangekeni komfanekiso omtsha nofanelekileyo.
Ukucamngca kwisibuko kunokukunceda ukunquma ukutshintsha umfanekiso. Ibhinqa lifuna ukuba likhangele ngokukhawulezileyo kwisibuko, kwaye iya kuqaphela ukuba akanalo ukhanyiso emehlweni akhe, akukho nto inqabileyo, akukho nto imomotheka ebusweni bayo. Ngokulula ukuba ibhinqa ibona le pateni, kufuneka icinge ngezinto ezifunekayo ukuze zitshintshe ngokupheleleyo.
Unokuziphoqa ukuba utyebe ngokuphindaphindiweyo, wenze ukukhangela, kodwa akusiyo yonke le miqathango eya kunceda ukulungisa le meko. Kodwa kuya kuba lula kubafazi ukuba batshintshe umfanekiso wabo, ngenxa yokuba batshintsha umfanekiso wabo, kunokukho utshintsho ebomini, kwaye konke oku akuyi kuba ngeze. Xa ibhinqa litshintsha ngaphandle, litshintsha kwakhona ngaphakathi. Emva koko, ukutshintsha umfanekiso, kuthetha ukuthakazelisa, entsha, kungekuphela kwabanye, kodwa wena.
Kukho amabali amaninzi xa abafazi beshintshe umfanekiso wabo kwaye badibana nesiqingatha esitsha, bafumana ulonwabo kwaye bavuya kakhulu ngenxa yokuba baphuma emfanekisweni odlulileyo. Kwenzeka ngokwaneleyo ukutshintsha iinwele kwaye ubuso bomfazi buza kudlala ngendlela entsha, izihlathi ziza kuguqa ngokugqithisileyo, amehlo aya kugubha. Kodwa ukuba kwenzeke oku, kufuneka ukhethe abaqeqeshi kuwe, ngubani oza kusondela kwenguqu yomfanekiso ngolwazi.
Ibhinqa kufuneka iqonde ukuze iguqule umfanekiso wayo, kufuneka icinge ngomfanekiso omtsha. Ukuyicombulula le ngxaki, ootitshala kufuneka badibane namaxesha ambalwa kunye nabaxhasi babo, bafunde iiparitha zabo. Emva koko baya kutsala umfanekiso ofanelekileyo kakhulu kulo mfazi othile. Iprofi ingacinga kwaye iyakwazi ukuba, iinguqu ezininzi zomfanekiso wale ntombazana, kunye nomfanekiso umthengi oyithandayo uya kuzaliseka.
Xa umfazi ethatha isigqibo ngesimo esizayo, kufuneka uqale usebenze ngokwakho. Kufuneka uhambe kwi-salon yobuhle ukuze utshintshe iinwele zakho. Omnye umfanekiso unokuza kunye neenwele ezahlukeneyo kunye neenwele. Kwaye kufuneka ukhethe ukhetho olulungileyo, olukhethiweyo olusekelwe kwimeko yesikhumba, ukuphakama kwebunzi, ukuma kweendlebe, uhlobo lobuso. Nantsi kuyimfuneko ukubiza uncedo lwabachwephesha abaqeqeshiweyo, abalungisi bezinwele, ukuba bangadikibala kwisiphumo.
Ukuqala kweenguqu kumfanekiso kukutshintshwa kwekhanda. Emva kokuba intloko yakho ihlotshiswe ngeenwele ezintsha, kufuneka usebenzise iinkonzo zomculi wokwenza. Ukwenza loo mveliso, apho uvele ujwayele, akunakwenzeka ukufanisa lo mfanekiso omtsha. Ngoko ke, ibhinqa kufuneka iyenze, ngokungafaniyo. Umculi ozenzayo onokuzifundisa unokufundisa umfazi kwiiyure ezimbalwa, ubuchule bokusisiseko, indlela yokumisela ukwakheka okusha. Kufuneka uzenzele kwaye ufunde indlela yokumisela ukwakheka ngokufanelekileyo ebusweni bakho.
Ngokuqhelekileyo, abenzi bamacwangcisi bobabini abenzi bee-artists kunye nabagcini bezinwele kumntu oyedwa. Fumana olo ngcali kwifashishini kunye nesitayela yimpumelelo enkulu. Akuncinci, kuya kunceda ukugcina imali, ngoko ke, ngolu hlobo lobugcisa, umfanekiso omtsha uza kuhambelana nokudibanisa. Emva koko, unokucinga malunga nantoni na into encinane kwaye angalahlekelwa nayiphi na into evela kwisakhiwo somfanekiso omtsha.
Emva kwentloko ihambelana nomfanekiso wakho omtsha, kufuneka uqale usebenze nalo lonke umzimba. Abesifazane abaninzi bathanda le ngxenye yomfanekiso wenguqu. Emva koko, kuya kufuneka benze uhambo olumnandi kunye nexesha elide ukuya kwiivenkile. Baya kujonga iisethi ezintsha zeengubo zokugqoka. Emva kwakho konke, iimpahla kufuneka zihambelane nombala kunye nomfanekiso omtsha. Yonke into ifanele ithandeke ngumfazi, egxininisa ubuchule kunye nokufihla impazamo, kwaye ngexesha elifanayo kufuneka lihambelane nezinye izinto ze-wardrobe. Kwaye akukho nto engenakwenzeka ngaphandle kokuncediswa ngabaqeqeshi, ngelishwa, ukunika uvavanyo olujoliswe kwinqanaba le-wardrobe, ayisoloko ifunyanwa kubafazi.
Musa ukulibala malunga nezicathulo ezintsha. Kufuneka ukuba uthenge iibhola, izibhotshi, kuxhomekeke kwithuba lonyaka. Izicathulo ezindala aziyi kuhambelana kakuhle nesitayela esitsha kunye nesinenekazi esinefashini kunye nenhle kakhulu le nto ayimkelekanga. Ukongeza kwizicathulo kunye neengubo, kufuneka uthenge ezinye izesekeli ezongezelelweyo, ezifana nezicatshulwa zeenwele, ubucwebe, izikhwama, amabhande. Baya kuncedisa umfanekiso, benze iiplastiki kwaye baphile.
Xa isitala seenwele sitshintshiwe, izicathulo ezintsha kunye nesambatho esitsha zifakwe, kufakwa i-makeup entsha, ngoko unokuzijonga ngokukhuselekileyo ekucingeni kwakho. Kwaye akuyi kukhanya kuphela, kodwa kuya kukhanya ngovuyo olumnandi, oya kuthanda ukuyikhumbula ngokuphindaphindiweyo. Ibhinqa elagqiba isigqibo sokutshintsha ikhabethe layo, kuthetha ukuba wagqiba ekubeni aphile ngendlela entsha. Owesifazane onqabileyo, ebona esitsha kwisibuko, uya kufuna ukuhlala efanayo. Ngokuphambene noko, kuya kutshintshwa rhoqo, ukwenzela ukuba uya kuba nesimo sengqondo sokutshintsha.
Ngoku siyazi indlela yokutshintsha umfanekiso kwaye sithathe okulungileyo. Siyathemba ukuba ezi ngcebiso ziyakukuvumela ukuba uzibuke ngendlela entsha kwaye uncede ukutshintsha umfanekiso wakho. Ngale tshintsho, ezinye iinguqu ebomini ziya kuza, kwaye ngokukhawuleza uza kuzibona.
Iyintoni uthando lomntu okhulileyo?
Ingane ayidli kakuhle
I-intanethi ixubusha amabele amatsha kaVictoria Boni, iifoto ngaphambi nangemva
I-liposuction engeyiyo yokupheka i-ultrasonic - iimfihlelo zempilo
Iingoma kunye neenyaniso malunga nokukhulelwa kwangoku
I-Horoscope yeCapricorn ngo-2011